ISIBONELO ungene: kokuyala ukuba imfundamakhwela
Wabasaqalayo badinga coaching kancane ngesihloko: "Indlela baziqambela amaphasiwedi futhi ungene isibonelo" ukuba okuthiwa futhi ngokwanele, futhi khumbula le nhlanganisela esibalulekile. Cabanga ngezibonelo amagama abasebenzisi kanye namaphasiwedi ukuthi angakwazi ukubhalisa umsebenzisi ukusebenza ku-intanethi.
Izinto zesimanje ukufinyelela komsebenzisi Inthanethi ukuze zonke izinto zawo ezingcono - inkululeko lokufinyelela olwazini, zokuxhumana ngemigudu ehlukahlukene, arsenal enkulukazi izindlela lobuchwepheshe ukuze kuboniswe imibono yabo yokudala, imithombo imali ... Ngezinye izikhathi kumemori ezinhle ngemvume incike izinto eziningi - isikhathi sokufunda le ncwadi, idatha isikhathi ukulondolozwa . Ukuze ukusebeza kahle Inethiwekhi yomhlabajikelele idinga ukungena ngamunye okungenani ezimbalwa namaphasiwedi sokufinyelela izinkundla, ukuxhumana nomphakathi, baxoxe, video umhlangano. Inkinga wukuthi abasebenzisi Internet - cishe siyizigidi eziyinkulungwane. Futhi ongakhetha yimpumelelo kakhulu futhi ethandwa ungene othile balufunda.
Kukhona izindlela ezahlukene ekwakhekeni amagama. Cabanga ngezibonelo ejwayelekile ka ungene ukuthi siyayamukela emhlabeni online. Ngesisekelo ezijwayeleke kakhulu ngokuvamile kudinga igama lalo, igama isigaba, inhlanganisela izinombolo anenani umsebenzisi (ngonyaka lokuzalwa enegama nezinye izinsuku ezibalulekile), isiteketiso, inguqulo angakahleleki igama. Kukhona kugembula lezibizo - e imidlalo ye-computer. Eqinisweni, akunandaba abaqukethwe igama lokungena ngemvume. Into esemqoka - ke kumele ahluke, kungenjalo umsebenzisi nje ngeke adlule inqubo yokubhalisa kusayithi. Ukungena ngemvume esikhethiwe ngezinye izikhathi akwenzeki ukushintsha, kungcono sondelana lo daba ngokucophelela okwanele.
ISIBONELO igama ngemvume ngesisekelo
Ngokuvamile, umsebenzisi igama ngokwakho kuwebhu usebenzisa akho idatha iphasiphothi. Lena ungene okunengqondo futhi kulula Ngokwesibonelo, ezivamile, kodwa ngenxa yenkinga esiyingqayizivele - ziningi lamagama efanayo. Kulesi simo, kukhona indlela: ukuxhuma igama ngedatha digital, ukwabelana baqinisile noma ikhonco, sebenzisa tijobelelo, ticalo, nezimpawu.
Konke kuncike umcabango yomsebenzisi. Nokho, kulesi simo, abaningi baba usuku olwaziwa lokuzalwa. Ungasebenzisa noma iziphi izinombolo - zip inombolo ikhodi umshini. Igama lomsebenzisi esetshenziswa ukungena kwi-site, iforamu, ingosi yokuxhumana nabantu. Ukuze wenze lokhu, ufuna ukuhlanganisa uxhumano nomsebenzisi iphasiwedi. Iphasiwedi kungcono ukuthatha eduze emoyeni login ukuthi kulula ukukhumbula:
lenochka (igama kadade).
Iphasiwedi kungashintshwa njengoba kudingeka, ikakhulukazi ngemva nokugenca imizamo.
Ngokuyinhloko ngemvume imeyili (izibonelo kuzoxoxwa ngezansi) wadala ukuqala ibhokisi lokungenayo-e-mail. Ikheli yokugcina luyinhlanganisela igama lesizinda we "izinombolo" ngabanye ibhokisi, okungase esachazwa amazwi futhi izibalo. Isibonelo esingokoqobo ungene nge-imeyli kanje:
Ukukhetha ibhokisi incike yokuzikhethela, kodwa igama - ubheka izilaleli ubuye ubheke lapho sizokwazi ukuthumela ama-imeyili kusuka kuleli kheli. Kukhona umehluko phakathi imeyili yomuntu siqu futhi service - ngowokuqala senzelwe kuphela ukuxhumana yangasese, owesibili - kuphela ubuhlobo bezebhizinisi.
Ngena ngemvume ukuze Skype
I kungenzeka wengxoxo kanye ezokuxhumana ezinjenge-skype ngokusebenzisa Skype isicelo isebenzisa abantu abaningi namuhla. Ngaphezu imeyli kanye nezinye ukubhaliswa eziningi eminingi online, Skype kanye ufisa ukubhalisa isibizo ukuthi kungaba lula ukukhumbula. Yikuphi okungcono ukusebenzisa igama lomsebenzisi Skype? Izibonelo kungaholela unomphela, kodwa kungcono ukuba basekele igama hlelo - Skype - futhi unamathisele idatha yakho siqu. Nasi isibonelo ungene, elakhelwe Skype:
Kuyoba ngaleyo ndlela kumelwe kugujwe eliyingqayizivele, futhi bonke abasebenzisi (ngisho nawe uqobo) kuyoba lula ukukhumbula igama lakho eliyingqayizivele ukuxhumana ku-Skype.
ungene Anhlobonhlobo nezobuchwepheshe
Uma okukhethwa ezichazwe ngenhla ahlukile ngokwanele, nakhu Nasi esinye isibonelo sokubaluleka ungene ukuthi ifaniswe ngempela ngokuqinile futhi sina. Lona igama lomsebenzisi ibhizinisi lakho oyisebenzisa emsebenzini noma ukuxhumana ne personas abalulekile umsebenzi, amakhasimende, izikhulu zikahulumeni. Uyavuma ukuthi ngokwabelana contact engenangqondo (lapusik@mail.ru noma solnyshko@net.ru) Wena neze bayothola ukuthembeka emphakathini ibhizinisi. Ngaphezu kwalokho, ikheli kanzima lwamakheli ukukhumbula, kodwa uma uqala wathola incwadi efana ekhelini angeke kaPawulu angena ajule, ulithumele ugaxekile. Ukunqoba igunya yomunye futhi ukugxilisa ukuzihlonipha, kubalulekile hhayi ukuthi professional, abanemikhuba emihle futhi ukusebenza ngempumelelo. Izinto ezincane like inkinobho noma edabukile ikheli le-imeyili silly noma i-alias kuyi-Internet, kungaba ngokulinganayo amahloni umqashi noma ibhizinisi umlingani. Nasi isibonelo ungene ukuthi lizobonisa ubuntu bakho futhi ubavumele kulula ukukhumbula:
Njengoba ubona, umbono kudalwa kusukela ngemvume ibhizinisi kakhulu ezahlukene.
Indlela ngekhanda ungene
Ukuze bazichaya ingozi ukulahleka kwedatha, kubalulekile ukuba ulungise inhlanganisela lomsebenzisi nephasiwedi endaweni ephephile ezingafinyeleleki bangaphandle, okubhalwe encwadini noma ukugcina ifayela okungaxhunyiwe ku-intanethi ekhethekile, lapho ungakwazi ukuletha yonke idatha ngabanye. Kuyinto efiselekayo ukuthi login nephasiwedi zibizwa bahlobene. Usizo lwabenza imisenenzi iphasiwedi ngemvume kungenzeka ngesimo igama umnyango noma umkhiqizo ukuthi nkampani inyathelisa. Personal - igama lomntwana noma umlingisi ozithandayo. Ukusebenzisa afanayo associative kungenziwa ngokuphephile ilungiswe imemori login eziwubukhazikhazi kakhulu.
AVG Technologies: isofthiwe eyisisekelo futhi impendulo kuyo
Indlela ukuvimba Kwiwindi: yonke imininingwane
Ukuvimba amasayithi: indlela ukuhambahamba? Indlela ukususa ukhiye kuwo wonke amasayithi
Izimfihlo hacker. Indlela Hack iphasiwedi kukhompyutha ngaphansi umphathi wendawo
"Hermitage-Kazan" - esikhungweni semfundo inhloko-dolobha Tatarstan
Francisco Franco: A Biography nomsebenzi zezombusazwe
Three yezaga ngokungesabi nangokuba nesibindi Kuhumusha yabo Nokuhlola
Kuyikhono wafunda: indlela sheathe izindonga plasterboard